प्रधानमन्त्री नहुँदा विधेयक पारित, दाहालको वक्तव्य र गोप्य बैठकको रहस्य के ? « Postpati – News For All
प्रधानमन्त्री नहुँदा विधेयक पारित, दाहालको वक्तव्य र गोप्य बैठकको रहस्य के ?
माघ १३, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री विदेश रहेका बेला नेकपाले तीनवटा महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय तथा छलफल गर्‍यो।
संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित, भेनेजुयलाको राजनीतिक संकटमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कडा वक्तव्य तथा तथा झम्सिखेलमा शीर्ष नेताको गोप्य बैठक तीन गतिविधि नेकपा भित्र देखियो।